ट्रम्पले देश निकाला गरिएका आप्रवासीलाई यिनीहरु मानिस हैन पशु हुन् किनभने ? - Enepalese.com
ट्रम्पले देश निकाला गरिएका आप्रवासीलाई यिनीहरु मानिस हैन पशु हुन् किनभने ?
इनेप्लिज २०७५ जेठ ३ गते ११:०४ मा प्रकाशित
अमेरिकाका रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले मे १६ तारिख बुधबार देश निकाला गरिएका अप्रवासीलाई यिनीहरु मानिस हैन पशु हुन् भनेका छन् । उन्ले केहि यस्ता अप्रवासीलाई यसो भने । आप्रवासन नीति सम्बन्धि आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा उनले गोलमेच छलफलमा यसो भनेका हुन् ।
उनलाई क्यालिफोर्नियाको अधिकारीले अप्रवासी मध्ये कै एम-१३ नामक खतरा समुहको अझ पनि अस्तित्व छ भने पछि उनले यसो भनेका हुन् । उनले अगाडी भने यिनीहरु ज्यादै बदमास हुन् । यिनीहरु मानिस हैनन । यिनीहरु पशु हुन् भने ।
उनले मन्तब्य राख्दै यिनीहरुलाई देश निकाला गरि रहेको बताए । यसको साथै कुनै पनि तहमा हटाउने उनले बताउदै यस्तो कहिले पनि नभएको बताए । उनले अगाडी अमेरिकाको आप्रवासी कानुन सबै भन्दा हरिलट्ठक भनि उल्लेख गरेको कुरा अमेरिकाको डेली बिस्ट मा समाचार छ ।